Lany ny volavolan-dalàna amin’ny herisetra: mampigadra ny fanerena ny vady hiray ara-nofo | NewsMada
Lany ny volavolan-dalàna amin’ny herisetra: mampigadra ny fanerena ny vady hiray ara-nofo
Lany teny anivon’ny Antenimerampirenena, omaly maraina, ny volavolan-dalàna momba ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy na maha vavy, ahitana andininy 23.
Dingana voalohany izany fa mbola maro ny lalana hizorany vao hivoaka ho lalàna hampiharina sy manankery. Voafaritry ny lalàna ny famaritana ny herisetra sy ny endrika amin’ny ankapobeny hisehoany. Ho an’ny fandraisana an-tanana ireo niharan’ny herisetra, voalazan’ny volavolan-dalàna fa andraikitry ny fanjakana ny mikarakara azy ireo eo amin’ny lafiny fitsaboana raha misy ny ratra, ny fanohanana amin’ny saina ary ny fitondrana ny raharaha eo anivon’ny fitsarana satria zony avokoa izany. Manana andraikitra hitoroka ny herisetra eo anivon’ny manampahefana ireo olona rehetra akaikin’ny olona iharan’ny herisetra na manana andraikitra eo amin’ny toerana hitrangan’ny herisetra. Sazin’ny lalàna izy raha tsy mandray izay andraikitra izay.
Ho an’ny mpanao herisetra, voavahavaha ao koa ny sazy samihafa mifandraika amin’ny endriky ny herisetra niseho. Anisan’izany ny fanerena ny vady na olona (miara-monina) hanao firaisana ara-nofo amin’ny tena, mety hitarika amin’ny fidirana am-ponja roa ka hatramin’ny dimy taona miaraka amin’ny onitra hatramin’ny 1 tapitrisa Ar.
Eto amintsika, 32% ny tahan’ny vehivavy iharan’ny herisetra ka herisetra momba ny fananahana avokoa ny 14%, araka ny fanadihadiana natao. 41%-n’ny vehivavy nohadihadiana no manaiky ho azo ampiharana herisetra izy ireo noho ny antony samihafa raha 29% amin’ny lehilahy ny manaiky izany tranga izany. Masoivohon’ny ady amin’ny herisetra sy ny fampanambadiana aloha loatra ny ankizy eto amintsika ny vadin’ny filoha Rajoelina.